Version 0.2.3 – New akara center
June 3, 2009 site na rịọ 7 Comments
Taa ntọhapụ nke Transposh plugin agụnye a ọhụrụ akara panel maka plugin. Ọhụrụ a akara panel awade mma usability na ndekọ ọnụ ọgụgụ maka plugin. Na-gụnyere bụ a atụmatụ na-enye gị ohere ịsụgharị ndabere asụsụ nakwa. Nke a dị mma n'ihi na ọ bụrụ na ị na-ede gị blog na ihe karịrị otu asụsụ, ma ọ bụ gị na-agụ na-ahapụ kwuru na otutu asụsụ. Ga-amasị m na-ekele Db0 n'ihi na-atụ aro ọhụrụ a mma.
Otu n'ime ihe ndị ka mma usability atụmatụ nke a tọhapụ bụ na akara na peeji nke ugbu a na-agụnye a njikọ na-atụ aro ọhụrụ atụmatụ (ma ọ bụ na-akọ chinchi) otú obi free iji ya!
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: akara center, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye
June 6, 2009 na 10:41 na
Ọrụ dị ka ọrụ a amara Otú ọ dị n'ebe ihe abụọ na-akpata nchegbu na usoro a. Ebe ọ bụ na ugbu a na-akpaghị aka na-amalite na-asụgharị bụla page, ọbụna ndị e dere na ndabere asụsụ, ọ nwere ike na-amụba ibu na ihe nkesa na DB. Nke abụọ, ọ na-emepụta ihe ndị ọzọ ohere maka imebisị na spammination dị ka onye nwere ike mfe imebi gị isi na peeji nke. Nke abụọ bụ m kasị ukwuu nchegbu.
June 6, 2009 na 1:16 obi
Ndewo. Ndenye ajụjụ. Echere m na Transposh ike ga-eji na google blọọgụ, ka m ?
June 6, 2009 na 3:16 obi
Ndewo. The Ndenye azịza, ọbụbeghị – ma nnọọ anya, M ga zipuru gị mgbe ya njikere maka ule ma ọ bụrụ na ị chọrọ.
June 7, 2009 na 4:51 obi
kpomkwem, na ga-magburu onwe. Daalụ.
June 8, 2009 na 1:35 obi
akpa, ekele unu maka uku a plugin!
i nwere nsogbu ụfọdụ. M nwere ike na-ahụ “Dezie Translation” igbe, mgbe i “Kwado ndabara asụsụ translation”. Ọ doesent okwu ahu nke previleges i inye. Na a na-enyere m, naanị ịsụgharị ndabere asụsụ.
Enweghị a ọnọdụ, i nnọọ ahụ flags.
Ọ bụrụ na ndị html umlauts na-nzobe dị ka N'ihi na a ka ihe atụ, na plugin bụ na nsogbu.
June 8, 2009 na 2:58 obi
nsogbu yiri ka Arthemia isiokwu. i tryd na na ọzọ isiokwu, n'ebe ahụ ka e edit igbe apperas.
Ka nsogbu na umlauts
June 9, 2009 na 10:28 na
M chọrọ ịgbanwe ọkọlọtọ maka bekee site na US na GB.
M na-arụ ọrụ otú ime ya na koodu na constants.php
M gbanwere akara;
$asụsụ = n'usoro(“na” => “English,anyị,1”,
$asụsụ = n'usoro(“na” => “English,gb,1”,
Nke a na-arụ ọrụ ezi ma o doro anya na ọ laghachiri azụ US mgbe nweta nkwalite.
Echere m na ọ ga-adị mma na-enwe ike ịgbanwe ya na GUI ma ọ bụrụ na ihe niile kwere omume.
Ọtụtụ ndị na ekele.